Kedu ụlọ ọrụ Australia kachasị ukwuu? | Njem zuru oke
Luis Martinez | 20/04/2021 09:30 | Emelitere ka 20/04/2021 10:31 | Australia
Kedu ụlọ ọrụ Australia kachasị ukwuu? Ajụjụ a adịkarịghị na mpụga usoro akụ na ụba pụrụ iche. Ihe a bụ eziokwu bụ na obodo oke osimiri dị anyị ezigbo anya ma anyị amachaghị banyere ya.
Agbanyeghị, ị kwesịrị ịma na Australia nwere mgbazinye kwa isi n'isi dị elu karịa nke Germany, United Kingdom na France. Na mgbakwunye, ọ nọ n'ọkwa nke abụọ, mgbe Norwayn'ime Ndepụta nke mmepe mmadụ na ebe nke isii na nke ụdị ndụ nke magazin ahụ kwadebere 'Onye Economist'. Maka ihe a niile, ịmara nke kachasị ụlọ ọrụ Australia dị mkpa na ụwa jikọtara ụwa taa.
1 Kedu ụlọ ọrụ Australia kachasị ukwuu? Site na Ngwuputa gaa ulo oru na ahuike
1.1 BHP Ijeri
1.3 Otu Rio Tinto
1.4 Otu Woolworths
1.5 Plọ akụ Westpac
1.7 Westfarmers, onye na-ere ahia n'etiti ụlọ ọrụ Australia kachasị ukwuu
1.8 Telstra Corporation nwere oke
1.9 Otu Transurban
1.10 Amcor Limited, nkwakọ ngwaahịa iji mepụta otu nnukwu ụlọ ọrụ Australia
Kedu ụlọ ọrụ Australia kachasị ukwuu? Site na Ngwuputa gaa ulo oru na ahuike
Largestlọ ọrụ Australia kachasị ukwuu na mpaghara akụ na ụba dị iche iche, mana ha niile nwere oke ike na ngalaba ọrụ ha. Anyị ga-egosi gị ụfọdụ n'ime ụlọ ọrụ ndị a.
Ọ bụ ihe otu n’ime nnukwu ụlọ ọrụ na-egwupụta akụ n’ụwa. A mụrụ ya na 2001 site na njikọta nke Britain Ijeri na onye Australia Broken Hill Onye Nwe. Isi ụlọ ọrụ ya dị MelbourneMana o nwere ndị nnọchi anya na mba iri abụọ na ise, bụ ebe ọ na - ewepụta ihe ndị ọzọ dịka iron, diamond, nickel na bauxite.
N'afọ gara aga, ọ kwupụtara ego ọ ga-enweta 46 otu ijeri dollar, nke nwere uru dị ntakịrị karịa ọkara, ihe ruru ijeri dollar 20.
Otu alaka nke Commonwealth Bank nke Australia
Dịka ị si hụ aha ya, ọ bụ ụlọ akụ na-arụ ọrụ, ọ bụghị naanị na mba oke osimiri, kamakwa ndị ọzọ niile nọ na mpaghara ahụ, yana na Asia na ọbụna n'ime United States y Great Britain.
Na asọmpi siri ike ya na ụlọ akụ ndị ọzọ dị na mba ahụ, Mba Australia, Commonwealth dị ukwuu karịa nke isi obodo. N'afọ gara aga, ọ kwupụtara ego ọ ga-enweta Ijeri dollar 30 nke Australia, nke ahụ bụ, ihe dị ka ijeri euro 45.
Otu Rio Tinto
Anyị na-alaghachi na ọrụ Ngwuputa iji kọọrọ gị banyere ụlọ ọrụ a dịkwa n'etiti ụlọ ọrụ Australia kachasị ukwuu. Isi ụlọ ọrụ ya ka dị na London, mana amụrụ ya site na njikọ ndị Britain Tinlọ ọrụ Rio Tinto-Zinc, na ebe a na-egwupụta ihe na Spen, na Australia Conzinc Rio Tinto.
Es ụlọ ọrụ na-egwupụta kool kasị ukwuu n'ụwa na afọ ole na ole gara aga ọ gbalịrị ịzụta Billion BHP, nke anyị gwara gị maka ya. Otú ọ dị, ọrụ ahụ agwụbeghị. Na 2020, Río Tinto Group kwuru ego ha nwetara fọrọ nke nta ka ọ bụrụ US $ 45 ijeri.
Ọ nwere otu n'ime ebe mbụ na nhazi ụlọ ọrụ nke akuku biotechnology. Ebe a na-emepụta ya gụnyere ọgwụ mgbochi, ya mere, ọ bụ isiokwu taa, kamakwa ngwaahịa sitere na plasma na mkpụrụ ndụ cell ndị ọzọ. Emepụtara ya na 1916 site na gọọmentị Australia n'onwe ya, mana edepụtara ya na 1994.
Ọ na-ewe mmadụ 25 n'ọrụ ma afọ gara aga nwere ego ha na-akpata ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ijeri dollar 10 nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ puku abụọ abamuru. Banyere isi ahia ya, o nwere uru nke ijeri dollar 145.
Plọ Ọrụ Banking Bank
Plọ akụ Westpac
Ọzọ ụlọ akụ na-egosi na ndepụta a nke na-aza nke bụ ụlọ ọrụ Australia kachasị ukwuu. Tọrọ ntọala na 1817, Ebe ọdịda anyanwụ pacific (nke pụtara Westpac) raara onwe ya nye ma ụlọ akụ ọdịnala na nke azụmahịa na nke azụmaahịa, njikwa akụ na ụba na ụlọ ọrụ na-echekwa ego.
O nwekwara alaka n’ime ya New Zealand. Banyere uru ya dị n'ahịa, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ijeri dollar 90 nke Australia. Nnukwu ego ị nwetara na 2020 bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ijeri 22 na uru dị ihe ruru ijeri dollar Australia. Banyere ndị ọrụ ya, o nwere ihe dị ka puku iri anọ.
Ọrụ nke ụlọ ọrụ a metụtara akụ na ụba, ọ bụ ezie na ya na nke nke etinye ego. Ọ nwere ọnụnọ na mba 25 ma nwee ihe karịrị ndị ọrụ 14 puku. Ọ bụ onye njikwa akụrụngwa kachasị ukwuu na mbara ala, dị ka ọ na-ejikwa ihe dị ka ijeri dollar 495 n'ụdị ụdị akụ a.
Isi ahia ya bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ijeri 53 na, na 2020, ọ kwupụtara ihe ruru ijeri dollar atọ nke uru. Ike dị ike nke ụlọ ọrụ a nke na ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke Australia kpọrọ ya "Mlọ ọrụ Millionaire."
Westfarmers, onye na-ere ahia n'etiti ụlọ ọrụ Australia kachasị ukwuu
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ndị gara aga raara onwe ha nye maka nsị, akụ na ụba na nsogbu ahụike, onye a na-eme ya ụlọ ahịa. Kpọmkwem, ọ na-ere kemịkal na ngwaahịa ụlọ ọrụ, fatịlaịza yana, ebe ọ bụ na ọ nwetara otu Coles, yana nri.
Leslọ ahịa Coles Group, ụlọ ọrụ enyemaka nke Westfarmers
Tọrọ ntọala na 1914 dị ka ndị ọrụ ugbo, na-arụ ọrụ ugbu a ihe karịrị otu narị puku mmadụ. Na 2020 o nwere oke ego nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ijeri dollar 31, nke ruru uru abụọ.
Telstra Corporation nwere oke
Otu n'ime ụlọ ọrụ Australia kachasị ukwuu enweghị ike ịnọ na ndepụta ụlọ ọrụ ndị a raara nye telivishọn. Kpọmkwem, ọ na-ere ekwentị, ekwentị na ọrụ ekwentị. Ọ bụ nke kachasị mkpa n'ime ndị na-arụ ọrụ na mba ndị dị n'oké osimiri, na-azụ ahịa ahịa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ijeri dollar 45.
Na 2019, o nwere ihe dị ka ndị ọrụ 26 na ego ha na-enweta kwa afọ ha dị ihe dịka ijeri dọla iri atọ maka uru net nke ihe ruru anọ.
Australia bụ nnukwu obodo, nwere ihe karịrị square kilomita asaa. Ya mere, ọ gaghị eju gị anya na ụlọ ọrụ raara nye iwu na ịrụ ọrụ nke okporo ụzọ Ọ bụ otu n'ime ndị kasị ibu na mba ahụ.
Na mgbakwunye, Transurban na-arụ ọrụ na Canada y United States. Isi ahịa ya dị ihe dị ka ijeri dollar 43 ma kee ya na 1996. Ugbu a, o nwere ihe dị ka ndị ọrụ 1500 na nnukwu ego nke ha dị ihe dịka ijeri dọla iri atọ ya na udiri uru ruru ihe ruru puku.
Stlọ Ahịa ekwentị Telstra
Amcor Limited, nkwakọ ngwaahịa iji mepụta otu nnukwu ụlọ ọrụ Australia
Dedicatedlọ ọrụ a raara onwe ya nye maka njem, ọ bụ ezie na ya na mpaghara nkwakọ ngwaahịa. Ọ dị na mba iri anọ, gụnyere España, na ọ nwere uru ahịa nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ijeri $ 27. O nwere ihe dị ka ndị ọrụ 35 na nnukwu ego nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ijeri dollar 10, ebe net uru dị gburugburu 1500 nde.
Na mmechi, ọ bụrụ na ị na-eche nke bụ nnukwu ụlọ ọrụ AustraliaHụlarị na ha so, n'ụzọ bụ isi, na ngalaba dịka ebe a na-egwupụta akụ, ụlọ akụ na njem. Agbanyeghị, nnukwu ụlọ ọrụ ndị ọzọ, dị ka CLS nwere oke, na-arụ ọrụ maka imepụta ihe ndị dị ọcha ma ọ bụ, dị ka Otu Goodman, ụwa nke azụmaahịa ụlọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Kedu ụlọ ọrụ Australia kachasị ukwuu?